UK: Soomaali magangalyo doon ah oo xabsi galay ka dib kufsi
» UK: Soomaali magangalyo doon ah oo xabsi galay ka dib kufsi
Ciise Muqtaar Maxamed waa wiil Soomaaliyeed oo 24jir ah oo maxkamadda Newcastle
Crown Court ee dalkaasi Ingiriiska ay bishii May ku xukuntay lix sano oo xabsi ah kadib markii ay ku cadaatay inuu weeraray oo kufsi la damacsanaa gabar 19 jir ah oo wadada socotay.
Ciise Muqtaar oo ahaa magangalyo doone sugaya sharcigiisa ayaa wuxuu tagay magaalo ya oo dhinaca woqooyi bari uga taalla Ingiriiska oo lagu magacaabo Tyneside halkaasoo uu Ciise doonayay inuu ka daggo hoy magangalyo-doon. Eedaysane Ciise ayaa gabadha kalatuuray kadibna ugu hanjabay inuu qori iyo midi wato, wuxuu ka qaniinay wajiga iyo madaxa asagoo isla markaana ka bixiyay garantii iyo rajabeetadii, wuxuuna sidookale dhabarka kasaaray gacantiisa si ay gabadhu ugu malayso inuu bistoolad wato. Gabadha ayaa isku dayday dhowr mar inay ka baxsato inkastoo uu xoog ku hayay balse markii dadka deegaanku ay ku soo baxeen ayuunbaa ay u suurogashay gabadha inay baxsato. Waxaa gabadha la sheegay inay u baahatay isbitaal si looga daweeyo qaniinyadii iyo xagatimihii kusoo gaaray weerarka.
Ciise ayaa warku intaas ku daray inuu kasiibtay oo gabadha ka dafay leesin ay wadatay intaysan ka cararin waxaana leesinkii lagasoo helay gurigiisa, halkaasoo laga soo xiray. Gabadha ayaa hada sheeganaysa in saamayntii kasoo gaartay iskudaygaas kufsi darteed ay umalaysay inuu kufsaday ayna cabsanayso oo aysan banaanka aadi karin aysanna xitaa seexan karin, iyadoo maxbuus ku noqotay gurigeeda.
Qareenka u doodaya Ciise ayaa ku dooday in xukunku uu aad u dheeryahay iyadoo la tixgalinayo inuusan gabadha kufsan oo ay kaliya ahayd iskuday maadaama kufsiga caadiga ah uu yahay toban sano, sidaas darteed ayuu Ciise ku guulaystay in xukunkiisa sadex meelood labo la tuuro, taasoo ah inuu afar sano xabsiga kujirayo.
Brian Forster oo ahaa xaakinka xukunka ku riday Ciise ayaa yiri: “Weerarkani wuxuu saamayn burburleh ku yahay gabadhan yar”. Wuu sii watay asagoo leh: “Waxaad ku tahay wadankan magangalyo-doone waana waajib saaran maxkamadda inay dadka gaarsiiso in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu dibada u baxo ama iska lugeeyo asagoon wax cabsi ah ka qabin in la weeraro”.